Gady Montebel amin'ny CICEE2021
Kisoa fanapahana avo lenta Montebel avy amin'ny fampisehoana Monteono ao amin'ny CICEE2021 (2021 Changsha International Construction Equipment Exhibition) any Changsha tamin'ny 5.19-22. Tady manokana tsy mahazaka akanjo Montebel dia vita amin'ny fitaovana TSG46A novolavolain'ny tenany. Mihoatra ny 42Crmo 50 ny ain'ny serivisy amin'ny chisel ...
Ny anjaran'ny tsenan'ny Rockbreaker Systems andrasana hitombo hatramin'ny 2021 hatramin'ny 2024 dia nitombo be | Mpanoratra: Delta Engineering, Rock-Tech, Astec Australia, milina fananganana Wuxi Golink, McQu ...
Araka ny tatitra vaovao navoakan'ny Reports Monitor, ny lohateny dia "Rockbreaker System Market: Global Opportunity Analysis and Industrial Forecast hatramin'ny 2021 ka hatramin'ny 2027." Ny tsena dia mitentina xx tapitrisa dolara amerikana amin'ny taona 2019 ary antenaina hahatratra xx hatramin'ny 2019 iray tapitrisa dolara amerikana. B ...
Atlas Copco MB 1500 dia nampiana ho an'ny tsipika famokarana mpamaky antonony: CEG
Ny fantsom-pifandraisan'ny MB 1500 an'ny Atlas Copco Construction Tools Co., Ltd. dia noforonina miaraka amin'ny faritra mihetsika vitsy kokoa ary manana ny fahatokiana tsara indrindra. Izy io dia mety amin'ny famongorana, ny fanajariana ny arabe, ny famonoana trondro ary ny fanorotoroana vatolampy faharoa. Ny singa vaovao dia atambatra amin'ny maodely efatra misy ...
Ambongadiny sinoa ambongadiny excavator fantsom-pifandraisana Furukawa F35 Hb20g Hydraulika Jack Hammer Rock Concrete Breaker
EVOQUIP dia nanambara ny fanendrena ny FJS Plant Repairs Ltd ho mpizara ara-dalàna any Irlandy. FJSPlant dia hanome fitaovana feno EvoQuip feno, ao anatin'izany ny fanorotoroana, ny fitiliana ary ny fitaovam-pitaterana; kojakoja am-boalohany; ary fikojakojana mekanika, manerana ny ...
Fironana momba ny tsenan'ny Crusher System, vintana ary vinavinan'ny indostria 2021-2027 | Circuits Breaker Technologies (BTI), Osborne, Tramack, Delta Engineering
Los Angeles, Etazonia: Nasongadin'ny QY Research fa ny tsenan'ny Rockbreaker Systems dia andrasana hirohotra amin'ny tahotra mampatahotra ao anatin'ny taona vitsivitsy. Ny tatitra dia mitondra ny lohateny hoe "Global Rockbreaker System Market Insights and Forecasts to 2027," ary manome fanadihadiana feno momba ny ...
Hammer nametraka excavator asa isan-karazany mampiasa
1, ny teknolojia fiasan'ny excavator Voalohany hanamafisana ny toe-javatra manodidina ny. Fandidiana rotary, manodidina ny sakana, tany mba hahalalana ny isa, fandidiana azo antoka; fandidiana, hanamafisana ny làlan-kizorana mialoha sy lavitra, hisorohana ny tendrena na ny fiantraikany; andramo ny tsy hanome ny fiara farany manoloana ny ...
Miasa tsara ny mpamaky hydraulic sy ny marotoa rock
1. Hery manaparitaka sahaza Ho an'ny fanorotoroana mahomby, ny mpampisaraka hydraulic dia mampihatra ny hery fanapahana sahaza azy. Raha tsy ampy ny hery fanapotehana, dia tsy hahomby ny angovo famelezana piston; Amin'izany no hamindrana ny herin'ny fanoherana ny herin'ny hammer amin'ny vatolampy brea ...
fikojakojana fanapahana hydraulic
Isaky ny ora fiasana 8 na indray mandeha isan'andro dia ilaina ny fanaraha-maso miolakolaka. Anisan'izany ny entana: • fantsom-bolo, famoahana solika, faritra simba, faritra malemy ary faritra tonta • zahao ny toe-pahasalaman'ny fitaovam-piasana • ahintsano ny mpikambana tsirairay • zahao ny ankapobeny. ny toetoetran'ny rafitra hydraulic • zahao b ...
ireo mpanamboatra fanapahana hydraulic dia mizara ny fampiharana ny marmara hidraulika amin'ny scraper kely
Ny scraper kely sy ny marotoa hydraulic dia atambatra mba hahatratrarana ny tanjon'ny milina misy tanjona maro. Ny tena hevitra dia ny fampiasana ny rafitra hydraulic an'ny scraper kely tenany mba hanitsiana ny toerana misy ny marotoa (ao anatin'izany ny fanitsiana ny haavony sy ny fanitsiana angle), ary miaraka amin'izay koa hampitomboana ...
Fampandrenesana famandrihana nitroka
Fa maninona no asiana azota? Ny nitrogen ao amin'ny marotoa manorotoro dia MAMPIASA ny marotoa famonoana hydraulic mba hitahirizana ny angovo sisa tavela sy ny angovo famerenan'ny piston mandritra ny fitokonana teo aloha, ary mamoaka ny angovo miaraka amin'izay mandritra ny fitokonana faharoa hampitomboana ny fahafahan'ny fitokonana. Raha fintinina, ny ef ...
Fampiharana chisel fanapahana hydraulic
Ny paingotra fanapahana hydraulic dia mampifandray ilay milina kely ary fandavahana, ny fampiasana injeniera amin'ny ankapobeny ny chisel ho an'ny vy hebagonaly sy vy tsy misy fangarony, fanapahana vy hexagonal hollow ao anaty zaridaina 22 mm sy 25 mm ny savaivony, savaivony ivelan'ny vy zaridaina poakaty sy 38 mm hatramin'ny 32 mm ...